GO-Globe.com mepụtara infographic, ndị Medialọ ọrụ na-ere ahịa na mgbasa ozi, na-ahọrọ isi data sitere na Social Media Examiner Akụkọ 2012 Social Media Marketing Industry. The Infographic na-ekpuchi ihe kachasị ọhụrụ na Social Media, Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi, Atụmatụ nke ndị na-ere ahịa mgbasa ozi na ọtụtụ ndị ọzọ.
N'uche nke m, nsogbu kachasị dị na ntụpọ. Ọ bụ ezie na teknụzụ anyị na-aga n'ihu na-akawanye mma, ụlọ ọrụ ka na-agbasi mbọ ike iji mgbasa ozi mmekọrịta mmadụ na ibe ya, chọta ndị na-eme ihe ike, tụọ nlọghachi na ntinye ego, wuo ndị na-ege ntị, yana ịzụlite usoro ndị na-achọghị ọtụtụ akụrụngwa. Nke bụ eziokwu bụ na uru nke mgbasa ozi mmekọrịta dị ịtụnanya, mana mbọ achọrọ iji nweta nsonaazụ ahụ na-aga n'ihu na ụlọ ọrụ na-aga n'ihu na-ere onwe ya ma setịpụ atụmanya dị elu.
Ezigbo infographic. Ịchọta ndị na-ege ntị lekwasịrị anya dị ezigbo mkpa, mgbasa ozi ọha mmadụ abụghị ajụjụ nke ọnụọgụ raw. Ihe ka mkpa bụ inwe ezigbo mmekọrịta gị na ndị na-ege gị ntị.
Nọvemba 30, 2012 na 5:48 nke ụtụtụ
Gbado anya ozi gị mgbe niile na mkpa nke ezigbo profaịlụ nke onye ahịa gị
ma ọ bụ onye ahịa ma ghara ịtụ egwu ịwepụ ndị na-enweghị ebumnuche efu
iji ọrụ gị. Ha nwere ike ime ka ọnụọgụgụ ahụ dị mma, mana ha bụ nke
enweghị uru maka azụmahịa gị. N'ezie, ọ bụrụ na ị kwụọ ụgwọ maka bandwit blọọgụ gị
site na gigabyte ma ọ bụ ị na-akwụ ụgwọ maka onye na-agụ akwụkwọ maka ozi-e-mail gị
ọrụ, ndị dinta freebie na-efunahụ ma ego gị na oge gị.
Ebe nrụọrụ weebụ na-emepụta Singapore
Daalụ maka ozi bara uru kọwara nke ọma.